Imiba emi-6 ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngokudityaniswa kweRegistry- iCadastre -Geofumadas
Agasti, 2015 cadastre, egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ukwenza iCadastre kunye ne-Real Estate Registry sebenze ngoku njengenye yeyona mingeni enomdla kakhulu kwiinkqubo zesimanje zenkqubo yamalungelo epropati.
Ingxaki ihlala ifana, nokuba iya ngaphaya komxholo weSpanishi. Kwelinye icala, umbono wokukholelwa ukuba kulula kakhulu, ke ithemba lokuma kwamaziko eziko. Ekugqibeleni, umntu olahlekileyo ngummi ofuna kuphela ukuba intengiselwano yakhe yenziwe ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Inyani yile yokuba akukho iresiphi yomlingo yoku, kuba nangona ingumbono wengqiqo, ukuziqhelanisa kusibonisa ukuba le yeyona ngqondo iphakathi kwabo bathatha inxaxheba kuthotho lwenkqubo yokuthengiselana.
Abantu banqongophele inkumbulo emva kokuba iqhosha lisilele, kwaye kulusizi ukuba uzuko lwempumelelo luhlala kwiimbongi kunokuba abahleli beenkqubo babalwe ngesitayile, ngaphandle kwekratshi kodwa njengenkcubeko elula yedemokhrasi yolwazi. Ngokuqinisekileyo, abanye bayenzile ngeempazamo ezimbalwa, kodwa apha ndicacisa izinto ezithile ezisisiseko zendlela esenze ngayo kwilizwe laseMelika eseMbindini, ezinye zibhekisa kwisibhengezo seCadastre 2014, apho kwavela khona umgangatho we-ISO 19152.
1. Inkcazo kunye nokwakhiwa kweNkqubo ye-vertebral.
Ukulunga kwenkqubo akusengumnqa, kuba siphila kwixesha lokuqhubela phambili kwezobuchwephesha kunye nokuvuselela ngaphakathi kokucacileyo. Ewe asithethi ngesixhobo kuphela, kodwa indawo esingqongileyo ebandakanya inkcazo yeshishini, abalinganiswa abanxulumene noko, inkxaso yezomthetho, ukumodareyithwa kweendlela zobuchwephesha, ukuphakanyiswa kweenkqubo, ukwenziwa lula kwezo zinxulumene nolawulo. indawo kunye nomjikelo wobomi wesixhobo setekhnoloji.
Ngaphandle kwenkcazo echanekileyo yemodeli yeshishini, phantse nayiphi na inkqubo iyasilela. Kuba isixhobo kuphela kwendlela.
Kwimeko yethu yokufunda, ukuhamba kwaqhutyelwa ngolu hlobo lulandelayo, kucacisa ukuba ayilona amanyathelo alinganayo kodwa phantse ngokulandelelana, okwakwenziwa kakhulu kwixesha leminyaka emibini:
Kwaphuhliswa iqonga elalilungele iiRejista, zombini izindlu kunye neCadastre, zibonwa njengenye irejista. Le yeNkqubo yeNgxelo eziManyeneyo (SURE), ethi emva kweminyaka eli-11, iqhubeke ukusebenza, emva kweenguqu ezine zikarhulumente -ndakanya ukukhishwa kombuso-Ukujikeleziswa kwabasebenzi abaqeqeshiweyo, izigqibo ezingenamthetho kunye nayo yonke into amazwe asaphuhlayo asetyenziselwe. Kwavavanywa kwiRegistry Circumscription enendawo eyi-160,000 yeepasile, okwangoku isebenza kwizithili ezili-16 kwezingama-24 kwaye esona sizathu siphambili sokuba ingakhange isuswe kwimeko yezopolitiko kungenxa yokuba yayisisixhobo esisebenzayo sabasebenzisi kwiRegistry naseCadastre -ukususela ekudalweni-.
Kuyilo lo Msebenzi, iinkqubo zeRejista kunye neCadastre ziphakanyisiwe kwimeko yokuqala, kwaye ngendlela engathembekanga, ezo zingena kumthetho omtsha.
Imodeli yolawulo lweCadastre yiyo ICoreast Cadastre Domain Model CCDM, eyayingo-2003 yayingumbhalo nje emva kweCadastre 2014 eyayingumbongo ngokoqobo. Mhlawumbi esi sesinye sezizathu zokuba iNkqubo iphumelele amabhaso kunye nembono ethandekayo kwiFIG Workshop eCzechoslovakia.
Igrafu yangaphambilini ibonisa ukuhambelana kweFolio Real kwiSistim yoNyathelo loBhaliso, kunye nokubandakanywa Intsebenzo bubuthathaka obungafakwanga kwi-ISO 19152. Ngexesha layo yayingenawo la magama, kuba i-CCDM yayingeyondululo; kodwa ingqiqo iyayenza. I-CCDM namhlanje yi-ISO 19152, eyaziwayo njengeLADM.
Nangona isixhobo sobuchwephesha sibonakala kakhulu xa kuboniswa iziphumo, oku kubandakanya uhlalutyo kunye nenkqubo yeenkqubo esele zikhona ezinembali yazo. Inzima, kuba ukusetyenziswa kweenkqubo kwahlukile kubhalisi omnye komnye; kananjalo kuba xa kufikwa kumba wokuzenzekelayo, into engasebenziyo ephepheni ayinakusebenza kwinkqubo yoomatshini. Ngaphandle kokuthoba isidima, kwezinye iimeko, kubhetele ukhethe ukuba nguzwilakhe kunonxibelelanisi; abanye bathi banyanzelwe ngokoqobo ukuba batshintshe ngebhetri yeeshifti ekungelula ukuyetyisa.
Kwakunyanzelekile ukuba kwenziwe umsebenzi omninzi wowiso-mthetho apho kwakulula ukwenza umthetho omtsha kunokuguqula lowo sele ukhona. IRegistry yayixhomekeke kwiNkundla ePhakamileyo yezoBulungisa, iCadastre yoNobhala we-Ofisi kaMongameli kunye ne-National Geographic Institute ye-Secretariat yeMisebenzi yoLuntu. Kwakudingeka ukudala iindlela ezintsha zokwenza ulungelelwaniso, ukunika umzekelo olula, ukuhluthwa kwiindawo ezisezidolophini apho kukho ukungqubana kwezinto ezichaseneyo nalapho abantu babhatala abanini abohlukeneyo. Umthetho wavumela ukuhluthwa egameni likarhulumente, ukuze kudalwe ukuthembana apho abantu baqhubeka nokuhlawula, bafumana itayitile yabo kwaye abanini bangaphambili baya enkundleni ukulwa nomcimbi wabo. Nje ukuba isonjululwe, imali kwi-trust iya kuba yeyakhe nabani na ophumelele isigwebo.
Nangona iminyaka emibini ingalungelelananga ukwenza zonke izinto, ukufika kukaRhulumente omtsha kwakungekho kubuyela emva. Izixhobo zazenziwe ngomatshini kangangokuba kwakunzima ukwenza lo msebenzi ngaphandle kokusebenzisa inkqubo.
2. Utshintsho kubuchule bokubhalisa Iphepha lobuqu kwiFolio Real
Kule ncwadana iincwadi ezipheleleyo, ukudibanisa kunye nokungaziphathi ngokuxhomekeke kubani khusela indawo yakho. Kwimeko yokufunda, ubuchule bokwenyani beFolio sele bukhona emthethweni kodwa abuzange busetyenziswe ngolu hlobo, ke isigqibo esona sigqibo yayikukuyeka kancinci kancinci ukusebenzisa iFolio Personal.
Njengenkcubeko jikelele, umahluko phakathi kwezi ndlela zombini usele ndlela yokuhambisa amaxwebhu axhasa amalungelo epropati.
Inkqubo yoBuntu yoFolio, igcina isalathiso kubaphathi, hayi kwinto, ukuze isazisi sokungena sithobele ukuthengiselana. Nangona ibuzwa imibuzo emininzi, ilifa elalifunyanwa ngabazali bethu koomakhulu nootatomkhulu bethu lisityala esi sigqibo ngokusemthethweni, kungengakuba sasisesona silungileyo, kodwa ngenxa yokuba sasetyenziswa kakuhle ngabantu ababeqhele ukwenza izinto ngolungelelwano, sasebenza kakuhle silandela amanyathelo ingqiqo yenkcazo, isichasiselo kumthamo wemihla ngemihla, ukujongwa phantsi, ukulawulwa kokuhanjiswa, ukungqubana kunye nesiqinisekiso. Ubunzima buvele kwinto yokuba ukusebenza kwintetho bekuyimfuneko ukubonisana nolwazi ngemvelaphi kwenye imiqulu, apho umthamo ophakamileyo wentengiselwano yemihla ngemihla wenza ukuba ixesha lokuphendula licothe kakhulu; Ngaphandle kokulibala ukuba ibhalansi yokubhalisa yayingenakwenzeka ukuba ilawulwe kwiimeko ezingathethi ukuba umntu ngamnye azilawule, ulawulo lwee-homonyms lwaluphambene kwaye iimeko ezinje ngee-urbanizations ezingezizo ezomntu ngamnye, izivumelwano zangaphambili kunye noluntu lweeasethi ezihlala ngaphezulu Ukholo Loluntu. Kuya kufuneka icaciswe ukuba inyani yokwenene ayithobeli iinkqubo zangoku; Zombini iindlela ezingasetyenziswanga kakuhle zikhokelela kwiimpazamo ezilinganayo. Kwakhona: ukuba ayisebenzi ephepheni, ayisebenzi kwinkqubo yoomatshini, ukuba khange isebenze kwinkqubo yakudala, ngokuqinisekileyo ayinakusebenza kule intsha.
Inkqubo yangempela yeFolioNgokuchasene noko, isalathisa iipropathi eziphantsi kwepleyiti yelayisensi eyahlukileyo, apho i-liens, abanini, uphuculo, abamelwane, kunye nezinye izinto zepropathi zibhekisa khona. Oku kwenziwa ngendlela ecacisiweyo, kubhekiswa kumaphepha, ngokuchasene neFoliyo yobuqu apho uxwebhu lwalukhutshelwa njengoko lwalunjalo kwaye iphecana lalisingelwe phantsi. Kumgangatho we-ISO 19152, ipropathi liCandelo loLawulo (BA_unit), kwaye inokuqhutywa kwiFoliyo yobuqu okanye kwiFolio yoqobo. Ewe ipropathi kwiFolio Real iphantse ilingane nesiqwenga se-cadastre kwaye inkqubo yokudibanisa iya kwenziwa.
3. Ukubekwa emgangathweni kweenkqubo zeCadastre.
Inqanaba lokuphuculwa kweCadastre lalingeyonto imnandi, ngakumbi ngenxa yokuba ungquzulwano lwenziwa phakathi kwegcisa lomgcini omdala owayenolwazi olwaneleyo oluncedo kunye nabo batsha ababesazi ngetekhnoloji kodwa bengazazi iziseko ezininzi zomthetho zecadastre. Kulungile okanye kungalunganga, sachonga iimpazamo kwaye intlawulo yayiphezulu kakhulu.
Enye ingxaki ngeCadastre kukuba inethemba lokuhlala sisiqithi esikhethekileyo esiphelelwa lixesha ngokulula, njengoko singadibananga nenkqubo yentengiselwano. Ngubani ongafuni ukuba i-cadastral mat ihlonitshwe ngako konke ukuthengisa, ukuhambisa, ukuvavanya, ukusetyenziswa kokucwangciswa kunye namaphepha ngaphakathi kwesakhelo sendima entsha.
Kwakudingeka ukwenza utshintsho kunye nomqulu, kuba ukunyaniseka izinto ezininzi zathethwa nguwe abafokazi kodwa azange zibhalwe. Ngokuqinisekileyo le miba yoyiswa ngamazwe amaninzi, kodwa ndiyichaza nje ngokunyaniseka kwisifundo sethu, apho iCadastre isengumceli mngeni onzima. Phakathi kwezinto endizikhumbula kakuhle:
Ukuphakanyiswa kwe-topology eqhubekayo; yeeploti kunye neempahla zokusetyenziswa koluntu ezinje ngezitalato, imilambo, amachibi, njl. Abokuqala babenikwe isitshixo se-cadastral kunye nefayile yabo ye-cadastral, kunye nepropathi kawonkewonke ikwanesitshixo se-cadastral ngephepha labo lolawulo. Oku kuyimfuneko, kuba ukungena kwepropathi, njengoko kuncitshisiwe, kufuna ubukho bonke beendawo zokungena kunye neendawo zokuphuma; kunye nokulawula uhlaselo lwexesha elizayo lwepropathi kawonkewonke ebhalisiweyo.
I-2014 Cadastre: I-Cadastre ye-2014 iya kubonisa imeko epheleleyo yomthetho kwintsimi, kubandakanywa nomthetho woluntu kunye nokuthintela.
Ukwahlula kwedatha ngokukodwa komthetho. Iimephu ngaphambi kokuphuculwa yayiyimisebenzi yokwenyani yobugcisa, kuzo, ukongeza iiplani, yayiziziza zomthetho, iindawo ezikhuselweyo, amanqaku omdla wendawo, imimandla yomngcipheko, njl. Ezi zahlulwe zaziimephu ezizimeleyo, zisenza iimephu zepasile zibukeke zilula, kodwa zifuna ukuququzelela ukwenziwa kwedijithali kunye nokuzenzekelayo kweenkqubo zokwenza izinto.
Oku kwavelisa nongquzulwano, kuba iCadastre yayifana nomenzi wayo yonke into. Nangona ibingenakho kwaphela ukwenza iindima zayo zibe semthethweni, apho amaziko anoxanduva sele ekho ngaphakathi kwamasebe awo. Ukudibanisa iZiko leLizwe leJografi kunye neCadastre kaZwelonke yayingelilo inyathelo lobulumko, kungengenxa yokuba kungenakwenziwa, kodwa ngenxa yokuba okusingqongileyo kwakungavuthwanga ukuba kukhokele i-IGN kwindima njengequmrhu elilawulayo lokuzoba; Ngezo ntsuku umxholo we-SDI wawungabonakali kangangokuba wawubonakala ngathi ususa kwi «umenzi omkhulu wemephu«.
I-2014 Cadastre: Incwadana yeCadastre iya kuba yinto edlulileyo.
Yahlula ukuphakanyiswa kokuphakama ukusuka kwii-update. Ngokutshayela iipasile kunye neerekhodi zaphakanyiswa, zakuba zifakwe ekhompyutheni, irekhodi yemephu yekhonkco yasetyenziswa ngendlela yoomatshini kwaye kamva kwenziwa iGeoparcela (Spatial_unit) + isicelo sokuchaphazeleka kwezomthetho nolawulo (I-Restrictios + Uxanduva + Amalungelo).
Imizobo ibaluleke kakhulu kwiinkqubo ezinkulu. Ayibandakanyi elinye icala lomsebenzi, nangona kunjalo isishwankathela ngakumbi ukusekwa kweFolio Real ngonxibelelwano lwayo kumhlaba wobhaliso loMhlaba.
Nje ukuba ikhonkco leMephu yeFayile lenziwe, ukuVavanywa koLuntu kwakulindelekile, emva koko ifayile yefayile yahanjiswa kwifayile ye-cadastral ukuze naluphi na uhlengahlengiso lwenziwe ngesicelo sokugcinwa kwe-cadastral. Oku kushiywe kwimeko yokukwazi ukwenziwa ngokwesicelo salo mntu unomdla, ngokwesikhundla sakhe okanye ngokwesicelo sabasebenzisi ababhalisiweyo (abacwaningi okanye amagcisa kamasipala). Okwangoku, inkqubo sele inentembeko eyenziweyo, eneziseko ezilungele ukuthunyelwa kumsebenzisi wabucala ongazukusebenza kuphela kwiCadastre kodwa nakwiRegistry kunye nokuhlaziywa kweNkqubo.
ICadastre ye-2014 iya kubhalwa kakhulu. Icandelo likarhulumente kunye necandelo labucala liya kusebenzisana.
Ishadi lesandulela ngolu hlobo, namhlanje lilungelelaniswa kwiimpawu ze-LADM, lubonisa indlela iinkqubo zenziwe ngayo ngaphantsi kwendlela yokwenza inkqubo, ukwenzela ukuba amanyathelo okuqala bebeyimodeli nje, kodwa loo nto ingaba yi-automated phantsi kwendlela yokuqhubela phambili yokusebenza.
I-Cadastre 2014: I-cardigraphy yeCastastral iya kuba yinxalenye yexesha elidlulileyo. Uhlala uhlala umzekelo!
Njengoko sele uqaphele, ndiyenza lula kwaye imfutshane ngenxa yokusikelwa umonde kwabafundi kwi-Intanethi. Kodwa izinto ezininzi esazenzayo zazingalunganga. Kuyamangalisa, kodwa enye yezinto ezazishiywe ngaphandle yayingumcimbi werhafu, ukucinga malunga nokuhlukana komthetho, ukubeka phambili kakhulu kunomthetho. Nangona ukulawulwa kwemicimbi yerhafu kuhlala kungabikho namnye, sayiqhubeka noomasipala kwimithetho yabo, ukunqanda ukugqwetha iindlela ezazisele zimodareyithwe yiCadastre. Ewe kunjalo, oku kukhokelele iinkqubo zikamasipala zokwakha iimodyuli zabo zecadastre ekuye kwanzima ukuza kuthi ga kulo mhla ukuzilungelelanisa.
Ukubandezeleka ngokungabandakanyi imali kusenzakalisa uqoqosho; Umgaqo osisiseko wokuzinza kwetekhnoloji: Ukuba awenzi mali, uyakufa. Namhlanje ukuba idluliselwe kuMqhubi, manani alula othethwano lwemihla ngemihla abonisa ukuba ngesele iqalile ukuvelisa imali eninzi kudala, kodwa ubuncinci bokuguqulwa kwemfuno kwaphumelela.
Ikhonkco yeRejista yePropati kunye neCadastre yindlela elula kunazo zonke kuzinzileyo... Ngokuqinisekileyo, ukuba bekulula. Kodwa kungcono kunokufuna ukuyenza uzinze ngokwakho.
I-2014 Cadastre iya kubuyisa iindleko.
4. Ikhonkco Ubhaliso loBhaliso- ipasile yaseCadastral.
Ukucwangcisa iinkqubo ezifana ne-maquila, ukuhamba kwe-registry kwakulula kakhulu:
Ukukhangela, ukucoca kunye nokutsalathiswa kwezindlu, Ukuze ufumane incwadi yedijithali njengemveliso, kunye nomgaqo ocacileyo ekusebenziseni oomatshini kwaye ke ukuthintele ukuqhubeka nokwenza iincwadi. Ngaphandle kwaMandla / izivakalisi kunye neminye imicimbi eqhubeke nokusebenza kwiFolio yobuqu.
Ikhishwe kwizihlalo eziphambili kunye nokuveliswa kweelayiti zeelayisiti. Ngale nto, bekukho uhlobo lwe-«folio yedijithali okanye iphepha lokwenyani ekwakhiweni», lona ngokwalo liphepha lokwenyani (ngenxa yenkqubo esetyenzisiweyo), kodwa ngokweeminqweno ethile yomthetho waseHonduras, kunye nokomelela kwenkqubo, Ifolio yokwenyani kufuneka idityaniswe neCadastre.
Kwicandelo leCadastre, uphononongo olukhulu oluziswe kwikhabhinethi iimephu eziprintiweyo ngokuchazwa kweefoto okanye iifayile zesitishi zizonke kunye neefayile zentsimi. Eofisini, iigeoparcels zenziwa zafakwa ekhompyutheni, zadityaniswa zaza zenziwa kusetyenziswa izixhobo zoomatshini ngelo xesha kunye neVBA yeMicrostation Geographics. Igrafu ibonisa inyathelo lamva nje eneneni elaliyinguqulelo yetekhnoloji kuba ngo-2003 ikhatriji yendawo ayizange isetyenziswe, kodwa iimephu zadityaniswa yicentroid yazo phantsi kwesikimu se-arc-node, nangona kunjalo yonke inkqubo yohlaziyo yayiyeyentengiselwano . Emva kwexesha, ukufuduswa kugcino lwedatha kunye nolawulo lwe desktop kunye neMephu yeBentley. Okwangoku kuphuhliso iplagi yeQgis.
I-2014 Cadastre: Ukuhlukana phakathi kweemephu kunye neeirekhodi kuya kupheliswa.
Nje ukuba igalelo le-BA_Unit (Ubhaliso kwiFolio yoqobo) kunye neSpatial_Unit ibikhona, enye inkqubo kwi-maquila yenze umsebenzi wokudibanisa. Benze uphononongo kwifayile ye-cadastral, apho ireferensi yobuqu yeFolio iphakanyisiwe, bathelekisa imiba yendawo, abanini, indawo, isichasi kunye namanye amayeza ukwenza ikhonkco.
Lo mfanekiso ulandelayo ubonakalisa inyani esemthethweni enxulunyaniswe nenyani ebonakalayo. Nangona ingumzekelo wendawo ehlala ezidolophini, inkqubo ayisiyonto ilula ngenxa yezizathu ezininzi. Kwezona meko zintle, kunokwenzeka ukudibanisa ukuya kuthi ga kwi-51% (Umndilili waseDolophini naseMaphandleni), ikhonkco eliseleyo liya kwenziwa kwimfuno zentengiselwano kunye neenkqubo zokubizwa kwetayitile ezinjongo zazo kweli lizwe ... kanye.
Inkqubo eHlanganisiweyo yeeRekhodi, nje ukuba ikhonkco lenziwe, ibonisa ezo zinto zimbini, kunye nezilumkiso malunga nokusilela okunokwenzeka. Ke ukuba ipleyiti yelayisensi ngaphandle konxibelelwano noRegistry yoMhlaba ibonisa kuphela isilumkiso esikhulu se «Awuyi-georeferenced ngokwemithetho«. Kananjalo iziphumo ezithintela ukusetyenziswa, ithambeka okanye ukuhlala kweepropathi, nangona le micimbi mibini ingumbandela osalindelweyo ... kwelinye inqaku, kuba ubuthathaka beziko ngumba ezingachazwanga ziingcali.
Kwinkqubo yokudibanisa kwakuyimfuneko-ngokukhawuleza ndivuma-Chaza iindlela ezizenzekelayo zesilumkiso okanye indlela yokulungisa, ukuze unxibelelwano ngezinto ezili-18 ezingathintelwanga zithintelwe, kubandakanya:
Enye ubuhlobo obuninzi phakathi kwamacebo kunye neelayisense,
Ulwahlulo lwamalungelo amaxwebhu obhaliso lokubhalisa,
Ukwahluke kweendawo ngenxa yokubonakala kokuhlasela kwendawo yoluntu,
Ukungafani ngokuguqulwa kweRejistri okanye kwiCastastral emva kokuba i-cadastral ihluthe,
Ukwahluka kwamagama abanikazi okanye ukuphindaphindwa kwabanikazi,
Ukulungiselela le nto, kusetyenziswe ubuchwephesha obusetyenziselwa ukugcinwa kwetekhnoloji: Yabela nabani na okhathaza kakhulu. Xa umsebenzisi ebona izilumkiso, ujonga indlela yokusombulula; iyonke, yenye yemigaqo yeRegistry: intengiso.
Yonke into yayilungile, de idibene neCadastre.
5. Idatha yeCadastre kunye neRegistry ayinakuze ifane.
Inyathelo lokunxibelelana "ngokwepolitiki" linqunyanyisiwe okwexeshana kwaye ukuza kuthi ga ngoku ngomnye wemiceli mngeni enzima kwimo enyanzelekileyo yomthetho, ukuba nayiphi na inkcazo kufuneka ifune ukunxibelelana neRejista yeCadastral. Eli candelo linzima, zombini kuba livumelekile kakhulu kodwa nangenxa yokuba lifuna njengoPopu. Nazi izikhokelo, uninzi lwazo ziinkqubo ekufuneka zibekwe emgangathweni.
Indawo yeCadastre kunye neRejistri ayisoze yafana. Ukulungiselela le ndlela, ifomula yokunyamezelana isetyenzisiwe, ethathela ingqalelo indlela yokulinganisa, imeko yedolophu / yasemaphandleni ngokusekwe kubungakanani bayo, kule meko inqanaba eliphezulu elisetyenziswe kuphando lwangaphambili, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo. Njengonyamezelwano oluphezulu, i-6% yathathelwa ingqalelo kwaye, njengoko ubona, kusetyenziswa ifomula enje, indawo yehla ukusuka kwi-6% ukuya kwi-1% njengoko ubukhulu befama bukhula.
Ifomula yafakwa njengenkqubo egciniweyo kwindawo yogcino lwedatha, kangangokuba ibonakaliswe kwinkqubo ngamandla. Ukuba indawo ebhaliweyo ayikho ngaphakathi kwoluhlu, emva koko inkqubo iphakamisa isilumkiso somahluko wendawo.
I-regastral registry ayifani nerekodi yezobugcisa. Ukuba ndiza kulinganisa ipropathi kahlanu, uququzelelo lwayo luya kuphuma ngalo lonke ixesha (ngaphakathi komda wokunyamezelana). Oko kuthetha ukuba ukuba ulungelelwaniso lwakho luphakathi komda, akukho mfuneko yokutshintsha ipropathi ye-cadastral; ukulungiselela oko, i-LADM ithathela ingqalelo irekhodi yemilinganiselo, iiklasi zeSaveyi, njengobudlelwane phakathi kweSource_document kunye neSpatial_unit.
Akunakwenzeka ukugxininisa ukuba umgaqo-nkqubo we-notarial protocol kufuneka bavele njengamagama abantu; Nangona umthetho-siseko usithi kufuneka ucace gca, siyaqonda ukuba kuxa kufuneka kuboniswane nemephu, kodwa ukuba umbukeli wemephu ucace gca ukuba awunabuchule, ke ezo zidibeneyo zinokuba zizitshixo zecadastral. Kuvakala kulula, kodwa ukufumana amagqwetha ukuze uwaqonde kuthatha ixesha; into esithemba ukuba iya kusonjululwa ngemizuzu yobhaliso.
Akunakwenzeka ukuqala inkqubo, ngaphandle kokulawulwa kakuhle. isatifikethi sokwenziwa kootitshala, iindlela zokulinganisa, ukunyamezelana, iifomathi zokubonisa ifayile kunye neenkqubo zokuphila phakathi kwedatha eqokelelwe ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuba xa ulinganisa ipropathi isidingo sokulungisa yonke indawo kubonakalisiwe, kuba iphakanyisiwe kakuhle okanye ngenxa yomahluko kwindlela, ngenxa yokuba i-LADM ithathela ingqalelo iPoint_parcel, apho umgwebo weArmagedon unokuthintelwa--ozayo ngoku-.
Umthetho osemthethweni ngumqondiso, awupheli. Kwakudingeka ukuba kuchazwe emthethweni ukuba uphando lwe-cadastral luyakwenziwa ngokusekwe kwimeko yomzimba, kwaye ukuba kunokwenzeka ukuba kubekho umahluko phakathi kwendawo ebhaliweyo kunye nendawo ye-cadastral, kwaye imeko yemida ayitshintshanga, kwaye akukho bungqina bamabango , kwaye ayikufuphi neendawo zikawonke-wonke, indawo ye-cadastral iya kugqitha. Hayi indlela elula ngayo, kodwa ukunyanzelisa ukuba izibhalo ezikhoyo kufuneka zitshintshwe lelinye ibali; okoko ngokomthetho kufuneka ndivume ilungelo elibhaliweyo kwaye andinakho ukubhengeza gwenxa into endiyamkeleyo phantsi kwemigqaliselo yangaphambili, ngenxa nje yokuba iiparameter zitshintshile
Kubalulekile ukuchaza iindlela zokuhlanjululwa kolwazi ukuququzelela ukusekwa kokuthe rhoqo kolwazi. Ukuba iziko elisemthethweni yiBanco Davivienda, kodwa kwimigaqo ebhaliweyo ivela ngamagama ahlukeneyo kwisebe ngalinye, inkqubo yokudityaniswa iyafuneka. Ngendlela efanayo, ukuba ipropathi yakhiwe ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa iyafana, ayihlali ekudibaniseni iipropathi kodwa ukudityaniswa. Kodwa yomibini le miba kufuneka ibe semthethweni.
Imingeni emikhulu iya kuhlala ikhona kubasebenzi, Kweli candelo kuhlala kuchasene notshintsho kunye nocwangciso lokuba izinto kufuneka zenziwe ngendlela enye kuphela. Ayikho enye indlela ngaphandle kokuzihlaziya nokuzishiya zikhuselekile. Ukujikeleza ngeenjongo zopolitiko kunokuba nakho ukwenza inzuzo, nangona kufuneka uqaphele ukuba iya kuba sesona sisongelo sikhulu. Ukuya kuthi ga kwinqanaba apho isiphatho esisemthethweni sinokuthathwa khona, ukukhuphela ngaphandle sisono sendawo, ukuba nje umdla wabucala ontsonkothileyo simahla.
Njengoko benditshilo ekuqaleni, into eli nqaku ayifuni ukwenza iiresiphi zemilingo. Ingakumbi kuba ubunyani beziko kwilizwe ngalinye linzima kakhulu, hayi ngenxa yezobuchwephesha okanye ezomthetho, kodwa ngenxa yezikhundla zamandla kunye nokusilela kombono wabasemagunyeni. Nangona kunjalo, umzekelo ubonakalisa ukuba kunokwenzeka ukwenza izinto ezinomdla kwilizwe lesithathu, ukuba amaxesha ozuko asetyenziselwa ukubopha imiba engenakuphinda ibuye. Amanye amazwe ayenzile ngee-follies ezincinci, abanye benzile imeko e bhetele maziko imfazwe ukuhlanganiswa kwangempela.
Ubhaliso lwepropathi lusekwe kwingqondo eqhelekileyo. Ukuthengiswa kwamalungelo epropathi kuye kwakho okoko umntu wafumanisa ezolimo, kwaye waqonda ukuba inokwenza indawo yokuhlala.
Igrafu ibonisa isicatshulwa esivela kuncwadi lwethu lwenkolo, apho amagama akhangeleka ngathi avela kunaniselwano lweRegistry isetyenzisiwe, ngedementi ebibhatelwe kwithuba elidlulileyo, kwiingqekembe zesinyithi ezixabisekileyo ezichazwe kumqolo -yintoni ingcamango enkulu kunoma yimuphi umphathi namhlanje-. Akukho mntu wakuthandabuzayo ukuqiniseka kwepropathi okanye ixabiso lelungelo elibhalwe kwi «Vula ukudluliselwa«. Ewe, ukuba besifuna ukudibanisa i-cadastre kunye ne-registry ngalo mhla, singaba neengxaki ezifanayo, kunye nomsebenzi ofanayo wokubonisana nabantu abatshayayo bemifuno njengathi.
Kwimeko yeHonduras, okwangoku kujongwa kwinguqulelo entsha yeNkqubo, iinkqubo ezimodelwayo ziphantse zabaluleka njengemiba engafikelelwanga, kuba ishishini liyafana, imeko-bume iya kutshintsha ubuncinci, iinkqubo ziya kutshintsha. Kwilizwe lezinto ezintsha zobuchwepheshe esihlala kuzo, phakathi komzuzu endiqale ngawo ukubhala inqaku kunye nomhla wokuba ngethuba uza kulifunda, kukho inyani entsha kubuchwephesha obunikezela ukusombulula ingxaki yeRegistry-Cadastre, kunye nabacebisi abathathu abatsha abanikezela iinkonzo. Kufuneka sikhumbule ukuba ezobuchwephesha zingeniso nje; ukulingana phakathi koxinzelelo phakathi konikezelo lobuchwephesha kunye nemfuno yala maxesha ngumgangatho.
Ukudibanisa iRegistry kunye neCadastre yisahluko ekufuneka siqalisiwe. Ukuba ithiyori kuphela, kwaye ayikaze iqalwe, iya kuba yintsomi yesayensi. Kulungile okanye kungalunganga, nje ukuba iqale, kuthatha ubugcisa ngakumbi kunenzululwazi ukuyizisa ebomini. Kodwa le nkqubo ilunge kakhulu, kangangokuba ayinakubathatha abantu abambalwa abanombono ocacileyo, kuba isisombululo kuwo onke amatyala sixhomekeke kwizibonelelo ezikhoyo zabasebenzi, abaziingcali kwimicimbi yabo: iRegistry, uLawulo loMhlaba, uLawulo loMhlaba, oomatshini abazisebenzelayo , inkqubo kunye ... nentsangu ethile ekhuthazayo. 🙂
Imingeni emitsha iyeza. Esinye isiqingatha senqaku sikufutshane nekona.
Post edlulileyo«Ngaphambilini iifayile shp Vula nge Google Earth
Post Next Ubungakanani bokwenyani bamazweOkulandelayo »
2 Iimpendulo "ezi-6 zokuqwalaselwa kwiRegistry-Cadastre Integration"
Andazi ukuba ndiwuqonda kakuhle na umbuzo, kwaye ukuba angaphezulu komnye. Ndiza kuzama
Inqaku lomthetho waseHonduran lithi ukuba kukho umahluko phakathi kwesivumelwano kunye ne-cadastre, kunye nemida ayitshintshanga, kwaye ulwazi lwe-cadastral luye lwanamhlanje, ulwazi lwe-cadastral lubekiwe. Ke ngoko umsebenzisi kufuneka atshintshe ukubhala kwakhe. Isivumelwano kufuneka sinamathele kwinkcazo yezobuchwephesha berekhodi le-cadastral.
Kwimeko yokuhlola, engadingi ikhowudi ye-cadastral, enje ngamatyala ahlobene nokubanga, akukho mfuneko yakwenza nekhowudi ye-cadastral. Rekhoda ngokulula umlinganiselo (ISO 19152 irekhodi loPhando).
Imida iveliswa yinkqubo ngendlela ezenzekelayo, kuhlalutywa kuqala iiplani ezizichukumisayo, emva koko ezo ezinokuchukumisa ukulunga koluntu, zihlalutya ezo kwelinye icala. Kwedatha efuduselwe kwisikimu, yenziwa ngephakheji kwi-BD, kwimeko yedatha engafuduswanga kwiGeographics, yenziwa yiVBA egcinwe kwiserver, kubhabho. Ukuba akukho phando kwaye asinalo iyelenqe elichongiweyo, kodwa ukuba unedatha edibeneyo yentsimi, inokuguqulwa ibe yiParcel Parcel, ukuze ungalahli ulwazi oluqokelelweyo, okanye ungene ungquzulwano kuba alunayo ijiyometri yokulinganisa. Kodwa kwaye ungavelisi ubungqina be-cadastral yedatha engekho ngaphakathi kwenkqubo.
ruben tacuri uthi:
Ndingathanda ukwazi ukuba ziziphi iindlela amaqhosha e-cadastral acaciswe ngayo kwaye kwimeko apho itayitile yokuthengisa umhlaba inezinto ezinobungqina obuqinisekileyo, oko kukuthi, kwicala laseNyakatho liwela umda lomntu u-X kwaye kwicala leMpuma liwela umda emntwini. Kwaye akukho X okanye Y zinepropathi eziwela umda womhlaba zinemida emibini kumazantsi enesitalato sikawonke-wonke kunye nentshona enendlela yommelwane.